Ejipta: Ao amin’ny Twitter, ny fikarohana an’i Wael Ghonim · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Janoary 2011 17:54 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Português, Français, Español, 繁體中文, 简体中文, Italiano, English
Ao amin'ny Twitter, maneho ny ahiahiny mikasika ilay Ejiptiana mpitoraka bilaogy sady mpitantana ny Google Middle East , Wael Ghonim, izay tsy hita nanomboka ny Alakamisy ireo namany. Ghonim, izay nianatra tany Cairo ary ankehitriny dia Tale Ara-Barotry ny birao Google any Afovoany Atsinanana, dia nandefa tweet ny faniriany handray anjara amin'ny hetsi-panoherana ny 25 Janoary:
Ghonim, izay nitafa tao amina seha-pifanakalozan-dresaky ny Al Jazeera tsy ekla akory izay mikasika ny fahalalahan'ny aterineto, dia nandefa tweets avy any amin'ny hetsika ny 25 Janoary. Ny faha-26, taorian'ny fanakanana ny Twitter, naneho ny hatezerany iny momba ny sivana atao ny tweet izay mety ho lasa “top tweet”:
Ny faha- 27, mangataka ny mpanjohy azy hivavaka ho an'i Ejipta izy, sady nanamarika ny tahony manokana noho ny hetsika ny androtr'iny. Nanomboka hatreo, nangina tanteraka ny famahanany Twitterary ary manahy ireo namany fa tsy hita izay nalehany. Tokony ho tamin'ny 4:30 tolakandro, ora ao Cairo, @mskayyali dia nandefa tweet:
Ora vitsy taty aoriana, nandefa ny sarin'i Ghonim tamin'ny tweet i @sokkari , mangataka ny mpamaky ao Cairo hizara azy io sy hitady azy.
Habib Haddad, namana irain'i Ghonim, nandefa tweet ho an'ny olona mba handray fepetra:
@mzaher koa dia nametraka anmtso ho an'ireo mpanjohy azy mba hilaza aminy raha nisy nahita i Ghonim: